Top 5 free Game duubo software 2015 u windowmac
Top 5 free Game duubo software 2015 suuqa kala / Mac
Barnaamijyada ciyaaraha iyo software ciyaaraha waxaa mar walba sare dalbaday in ay dadka isticmaala iyo waxa oo dhan waxaa sabab u ah xaqiiqada te in dadka isticmaala ee ma aha oo kaliya geliyaan videos u websites caan ah, laakiin waxa ay sidoo kale hubineysaa in xalka ugu wanaagsan oo tayo sare leh waxaa weeye in la hubiyo in in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijada farshaxanka. Waxaa sidoo kale in la xuso in ay jiraan dhowr barnaamijyo duubo ciyaarta in ay yihiin lacag la'aan iyo sabab la mid ah tutorial tan loo qoray iyo waxa ay sidoo kale ka dhigi lahaa hubiyo in user helo natiijada ugu wanaagsan. Waxaa sidoo kale in la xuso in OS Mac iyo barnaamijyo lacag la'aan ah oo la xidhiidha ayaa sidoo kale daboolay buuxa marka ay timaado tutorial this.
Qeybta 1: Top 5 free software duubo Game 2015 daaqado
Qeybta 2: Top 5 free Game duubo software 2015 u Mac
Liiska ugu sareysa 5 barnaamijyada duubo ciyaarta free waa sida soo socota:
1. DVD video screen jilicsan free video taariikhqorihii
Miday waa wax ayaa mudnaanta koowaad ee horumarinta barnaamijka iyo sabab la mid ah sidoo kale waa in la ogaadaa in user waa in la hubiyo in ugu fiican iyo kan gobolka ee barnaamijka fanka la soo bixi in wax lagu sameeyey in ka dhigi hab xaq oo aan wax arrintan oo dhibaato maadaama ay tani waa barnaamijka ugu wanaagsan ee liiska:
Taariikhqorihii 2. Powder
Sidoo kale waa mid ka mid ah ugu wanaagsan iyo gobolka barnaamijyada farshaxanka ah taas oo ka dhigaysa hubiyo in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah adeegyada tahay wax waqti ah gudahood oo dhan iyo duubo ee ciyaarta waxaa lagu sameeyey caadadii adkayd. Sida barnaamijkan waa wejiyo u hubiyo in xalka ayaa waxaa sidoo kale lagu hayaa sare ka dhigi lahaa.
Sidoo kale waa mid ka mid ah barnaamijyada kaas oo lagu qiimeeyo sare by users iyo sabab la mid ah ayaa lagu soo daray liiska. Sababta labaad ee barnaamijka ayaa waxaa ku xusan waa xaqiiqda ah in ay fududahay in la isticmaalo iyo sidoo kale qori karta kulan la caddeeyo weyn.
horumarinta barnaamijka ka dhigay u xaqiijiso in uu hayaa fudud iyo user helo natiijada ugu wanaagsan gudahood markii uu soo ka go'an qabtaan ciyaarta. Waxaa sidoo kale in la xuso in user a laylis kaloo isticmaali kartaa barnaamijka fudayd weyn iyo Hufnaan iyo sabab la mid ah ayaa lagu qiimeeyaa mid ka mid ah barnaamijyada ugu fiican ee jeer oo dhan.
5. Screen Suite duubo
Saamayntii barnaamijka lagu xukumi karaa xaqiiqda ah in waxa ay sidoo kale u dhaqmo sida qabashada video ah oo wuxuu hubiyaa in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijooyinka tahay in arrintan la xiriira ka. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in sidoo kale la hubiyo in barnaamijka la soo bixi la version ugu dambeeyay gundhig dhex URL in lagu Xusi, si loo hubiyo in natiijada ugu wanaagsan waxaa lagu helaa, waayo, taas oo barnaamijka ayaa lagala soo bixi.
Te muhimadda OS Mac lagu xukumi karaa xaqiiqda ah in ay tahay OS labaad ee ugu isticmaalay adduunka ka dib markii daaqadaha, sidaa darteed waa in aan la dayacay karo. Ka dib waxaa liiska ka mid ah 5 barnaamij lacag la'aan ah hogaanka gsme duubo for Mac.
1. Vixy taariikhqorihii
Waa mid ka mid ah ugu wanaagsan iyo gobolka barnaamijyada farshaxanka oo loo isticmaali karo by user si loo hubiyo in ugu fiican ayaa lagu rakibay oo u gebi ahaanba waa mid lacag la'aan ah. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in tijaabin barnaamijka si fiican si ay u hubiyaan in shaqada loo qabanayo hab ugu fiican.
2. celis Video Ciidamada
Iyada oo ku xidhan korkiisa processor barnaamijka tani waa ugu fiican iyo kan gobolka ee software tahay taas oo ka dhigaysa hubiyo in isticmaalka ee processor loo sameeyo sida baahida iyo dalabaadka video ah taas oo lagaga bixi oo halkan waa barnaamijyada ugu fiican ee jeer oo dhan.
Waxaa ugu fiican iyo kan gobolka ee barnaamijka tahay taas oo ka dhigaysa hubiyo in dajinta ee file waxaa sidoo kale si fudud oo fudud oo sabab la mid ah sidoo kale waa in la ogaadaa in user waa in la hubiyo in barnaamijka ugu wanaagsan ee la soo bixi sida sameeyo waa waa in ay haystaan ​​nidaamka. Saamayntii guud ahaan waa weyn iyo barnaamijka waxaa lagu qiimeeyay sida ugu fiican ee jeer oo dhan.
4. Open software la shubay ballaaran
Waa barnaamij ah in la soo saaro si loo hubiyo in user helo natiijada ugu wanaagsan iyo tayada guud waa weyn yahay marka ay timaado kulan qoro. Barnaamijku waxa uu ahaa ciyaaryahanka ugu fiican marka ay timaado xal iyo sabab la mid ah waxaa lagu talinayaa in dhammaan isagana si aad u hesho shaqada lagu sameeyey tayada iyo fasalka mar barnaamijka la soo bixi.
Waxaa ugu fiican iyo kan gobolka ee barnaamijka fanka taas oo ka dhigaysa hubiyo in user helo ugu fiican iyo natiijooyinka waa kuwa ugu fiican marka ay timaado kulanka duubay. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa inay hubiyaan in barnaamijka la soo bixi oo lagu rakibay oo aan wax arrintan oo dhibaato ka URL ku xusan si aad u hesho natiijooyinka ugu fiican
Ka hor inta barnaamij kasta oo la soo bixi u tahay in la xuso in user waa in la hubiyo in ugu fiican oo gobolka ka mid ah muuqaalada tahay la akhriyi ay weheliyaan user rating si loo hubiyo in wixii kaloo la sameeyo iyada oo aan wax arrintan oo dhibaato sameeyo iyo user sidoo kale waa helitaanka natiijooyinka ugu fiican. Barnaamijyada duubo ciyaarta waa mid aad muhiim u ah ayaa isagana ah oo sidaas daraaddeed user waa in la hubiyo in mid ka mid ah qabsashada video xal sare waxaa soo bixi in ay ka fogaadaan qashinka waqti iyo arrimaha kale ee la xidhiidha la sameeyo.
Top 5 talooyin aad u baahan tahay ogaato oo ku saabsan taariikhqorihii gameplay
Top 20 Android Games for Kids 2015 doonin U Dhoola caddee
> Resource > Game > Top 5 free Game duubo software 2015 u windowmac